Edhisheni timu | Kufamba Nhau
Actualidad Viajes ndeye webhusaiti yeBhuku reBhuku. Yedu webhusaiti yakatsaurirwa ku nyika yekufamba uye mairi tinokurudzira nzvimbo dzekutanga apo isu tinoda kupa ruzivo rwese nezano pamusoro pekufamba, tsika dzakasiyana dzenyika uye zvakanakisa zvinopihwa uye vatariri vevashanyi. Kwemakore akati wandei takagadzira a kufamba podcast iyo yaive yakabudirira kwazvo, ichiwana iyo nzvimbo yekutanga muEuropean Podcast Awards muboka reBusiness muSpain uye rechina muEurope mugore ra2011 pamwe nekuve wekupedzisira mumakore 2010 y 2013.
Dare revapepeti reActualidad Viajes rinoumbwa ne vanofarira vanofamba uye globetrotters emarudzi ese vanofara kugovana ruzivo rwavo uye ruzivo newe. Kana iwe zvakare uchida kuve chikamu chayo, usazeze kuita tinyore isu kuburikidza neichi fomu.
Sezvo ini ndaive mudiki ini ndoda kuziva dzimwe nzvimbo, tsika uye vanhu vadzo. Pandinofamba ndinotora manotsi kuti ndikwanise kuendesa gare gare, nemazwi nemifananidzo, kuti iyo nzvimbo yacho ndeyei kwandiri uye inogona kuve kune anoverenga mazwi angu. Kunyora uye kufamba zvakafanana, ndinofunga ivo vese vanotora pfungwa nemoyo wako kure zvakanyanya.
Kugovera zvandinowana kutenderera pasirese uye kuyedza kuparadzira kuda kwangu kwekufamba chinhu chandinoda. Ziva zvakare tsika dzemamwe mataundi uyezve iyo yekushanya. Saka kunyora nezve idzi nyaya, kuzviunza padyo neruzhinji, kunondizadza nekugutsikana.
Ndakagara ndichifarira mitauro kubva kutenderera pasirese. Saka semudzidzisi weChirungu, ndinodawo kuziva mitauro yakasiyana kana matauro ekutanga. Imwe yeiyi nzendo yandinoita kudzidza kutsva kwandinozoyeuka kweupenyu hwese.
Akapedza kudzidza muKushambadzira, ini ndinoda kunyora uye kutsvaga nyaya nyowani nenzvimbo kwenguva yakareba sezvandinogona kurangarira. Kufamba ndechimwe chezvandinoda uye ndosaka ndichiedza kutsvaga ruzivo rwese nezve idzo nzvimbo dzandinotarisira kuona rimwe zuva.
Vanoti kune marudzi mazhinji evashanyi sekunge kune vanhu vari munyika. Mukufamba kwangu kwese, ndakaziva zvakasiyana siyana zvekufarira zvatinogona kumhanyira mazviri, saka muActualidad Viajes ini ndichakupa iyo ruzivo iwe rwaunoda kuti unakirwe nezororo rako kuzere mune chero kona yepasi.
Ini ndinofunga kuti kufamba ndechimwe chezviitiko zvakapfuma munhu anogona kurarama ... Zvinonyadzisa, mari iyoyo inodiwa kune izvi, handiti? Ini ndoda uye ndiri kutaura nezve ese marudzi enzira mune ino blog asi kana ndiri kuzopa kukosha kune chimwe chinhu, ndidzo nzvimbo dzandinoenda ndisina kusiya mari yakawanda munzira.
Sezvo ndaive mudiki ndaigara ndichida kufamba uye zvishoma nezvishoma ndakakwanisa kuve mufambi asinganeti. Kwangu kwandinofarira nzvimbo: India, Peru uye Asturias, kunyangwe paine mamwe akawanda. Ini ndinoda kurekodha pavhidhiyo izvo zvandinoda uye pamusoro pazvo zvese kutora mifananidzo yazvo sekunge yaive yekuJapan. Ini ndinoda kuyedza yechinyakare gastronomy yenzvimbo yandinoshanyira uye nekundiunzira mashoma mabikirwo uye zvigadzirwa zvekugadzira pamba uye ndigovane navo nemunhu wese.